Mbola tsy fantatra aloha hatramin’izao ny tena nahatonga ny loza ka nampianjera ny angidim-by izay nitondra azy ireo. Nangidy tamin’ny vadiny, Vanessa Laine Bryant sy ireo zanany telo ambiny izao loza izao ary tena niantraika tany amin’ny mpankafy ihany koa. Samy naneho ny alahelony avokoa ireo mpankafy basikety sy ireo namany akaiky, tany anaty tambazotra sosialy tany. Araka ny fantatra dia tany amin’ny Pacific View Memorial Park any Corona Del Mar Kalifornia no natao ny fandevenana azy. Nangingina io fotoana farany nanaovam-beloma azy ireo io ary izay tena namana akaikin’ny fianakaviana no nanatrika izany, ny faran’ny herinandro teo.
Brigitte Macron : “Mahitsy avokoa ny fomba firesakay mivady”
Nasain’ny onjam-peo RTL ny alarobia maraina lasa teo i Brigitte Macron, vadin’ny filoham-pirenena frantsay. Nandritra izany resadresaka izany no nilazany fa mahitsy avokoa ny fomba firesaka eo aminy sy ny vadiny, na eo amin’ny fiainam-pitiavan’izy roa na eo amin’ny sehatry ny asa. Nilaza izany ity vadin’ny filoha frantsay ity fa na misy ny kiana mety mahakasika ny vadiny dia tantarainy any izany. Mahitsy sy mazava ny fomba firesahanay ary mandray tsara ireo kiana izy, entina handroso. Hitako hoy izy ny asa miandry ny filoha, ny zavatra iainany amin’ny andavanandro ary fantany ny olana sy taratasy tsy maintsy sahaniny izay tsy misy avelany mihitsy. Mahatsapa tena, noho izany ity vadin’ny filoha Macron ity fa izy no akaiky indrindra ny filoha ka hiresaka momba izany rehetra izany.